सरकारी कार्यालयमा छड्के, ९६ कर्मचारी अनुपस्थित,जिल्ला अस्पताल नै खाली, कोही बिदा लिएर अमेरिकामाव ! - PUBLIC AAWAJ-पब्लिक आवाज
सरकारी कार्यालयमा छड्के, ९६ कर्मचारी अनुपस्थित,जिल्ला अस्पताल नै खाली, कोही बिदा लिएर अमेरिकामाव !
प्रकाशित : मङ्गलबार, साउन २८, २०७६०८:४५ पब्लिक आवाज /संवाददाता
स्याङ्जा, २८ साउन/जिल्लाका सरकारी कार्यालयमा अनुगमन गर्ने क्रममा ९६ कर्मचारी अनुपस्थित भएको पाइएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय स्याङ्जाले सोमबार जिल्लास्थित सरकारी कार्यालयमा छड्के अनुगमन गर्दा विभिन्न कार्यालयमा कर्मचारी अनुपस्थित रहेको पाइएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय स्याङ्जाले जनाएको छ ।
जिल्ला अस्पतालजस्तो संवेदनशील कार्यालयमा एकैपटक सबै अधिकृत अनुपस्थित हुनु दुःखद भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी निरौलाले बताउनुभयो । डा मरासिनी असार मसान्तसम्मको बिदा लिएर अमेरिका र डा पोखरेल दुईहप्ते बिदामा रहनुभएको निमित्त प्रमुख रञ्जु पोखरेलले बताउनुभयो । त्यस्तै आयोजना कार्यान्वय एकाइ (शिक्षा) मा १० कर्मचारी रहेकामा सबै कर्मचारी काज लिएर बसेको भेटिएको प्रजिअ निरौलाले बताउनुभयो ।
यस्तै जिल्ला तथ्याङ्क कार्यालयमा ११ कर्मचारी रहेकामा नौ कर्मचारी ‘फिल्ड’ लेखेर बिदामा बसेको देखिएको छ । अनुपस्थित कर्मचारीलाई स्पष्टीकरण सोधिने र बिदा नलिनेको गयलकट्टा हुने बताउँदै प्रजिअ निरौलले गयलकट्टा हुने कर्मचारीको गयल बराबर सेवाअवधि कम हुने सरकारी नियम रहेको बताउनुभयो ।
वृद्धभत्ता लिन गएका ९५ वर्षीय वृद्ध मृतावस्थामा भेटिए !
मोटरसाइकमा पनि जिपियस सिष्ट्म लागु गर्ने तयारि
रामेछापमा अविरल बर्षाः पहिराेले बगाएर एक महिलाको मृत्यु
चाडपर्वमा आपराधिक क्रियाकलाप रोक्न- सशस्त्र प्रहरीले राजमार्गको सुरक्षा गर्ने